Etu esi amata ma ọ bụrụ na ahia Forex bụ Halal - Mụta 2 Trade February 2021
Etu esi amata ma ọ bụrụ na ahia Forex bụ Halal 2021
N'ihe banyere ịzụ ahịa azụmaahịa, otu n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị nke ndị na-eso ụzọ Alakụba okwukwe na-ajụ bụ: kedu ka m ga-esi mara ma azụmaahịa azụmaahịa ọ bụ halal? Ọ bụrụ n ’ị na-eche otu ihe ahụ, ị ​​ga - enwerịrị peeji ziri ezi.
Ọ bụ ezie na a na-echekarị ịzụ ahịa Alakụba na ọ bụ Haram, a ka nwere ụzọ ị ga-esi zụọ ahịa ebe ị na-anọgidesi ike n'okwukwe gị. N'ezie, a nabatara halal ma kwe ka okwukwe Alakụba kwe ya, ebe amachibidoro Haram. N'ihi ya - ajụjụ bụ: forezụ ahịa azụmaahịa ọ bụ ihe ziri ezi?
Ozi oma diri gi bu na ahia halal Forex forex ahia do adị, ha anaghị ekwe nkwa ịmịghachi ego ma ọ bụ ụgwọ mgbanwe. Na ngwụcha, nke a dị mkpa maka ịtụle azụmaahịa Forex ka ewere ya dị ka ihe halal.
Ọtụtụ puku akụ CFD iji zụọ ahịa
Kedu ihe bụ Islamic Forex Trading Account?
Maka ndị na-ekwesị ntụkwasị obi na Quran ma chọọ ịgbaso ụkpụrụ nke ego Islam, ebe ha na-etinye aka na oghere itinye ego n'ịntanetị - enwere akaụntụ azụmaahịa azụmaahịa Forex. A na-akpọkarị nke a dịka akaụntụ nnabata-swap ma ọ bụ akaụntụ azụmaahịa halal Forex.
Akaụntụ Islam anaghị akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa. Nke a bụ n'ihi na iwu Sharia (aka iwu Islam) gbochiri ndị okwukwe Alakụba site na ịkpata ego mmasị na givings, yana akwụ ụgwọ mmasị.
A ghaghi ịhazi azụmahịa ọ bụla n'ime ego islam na-arụ ọrụ ozugbo, nke pụtara na azụmaahịa ego pụtara ìhè ga-esi n'otu ego gaa na ọzọ ozugbo. N'ụzọ dị oke mkpa, nke a gụnyekwara ụgwọ azụmahịa ọ bụla.
N'agbanyeghị azụmaahịa azụmaahịa nke halal na-abụghị nke ọhụụ, ọ nweghị ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enweghị ego na-enye ndị ahịa ahịa akaụntụ alakụba. Mana, ka anyị na-ekpuchi na njedebe nke ndu a - anyị ejirila aka anyị họpụta ụfọdụ ndị ahịa azụmaahịa halal kachasị mma na-arụ ọrụ ugbu a n'ahịa.
Ka o sina dị, anyị na-ahụ na akuko azụmaahịa islam Forex Forex anaghị akpọsa ngwa ahịa. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ndị ahịa pere mpe na-arịọ ụdị azụmaahịa a, a ga-ekwukwa na, ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ ego maka azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ahụ.
Halal Forex trading nyiwe-ebu a otutu myirịta na a ot Forex trading akaụntụ. Ma, n'ezie, a na-emegharịrị ihe ụfọdụ iji zute ụkpụrụ ndị bụ isi nke ego Alakụba.
Isi ụkpụrụ anọ nke ego Islam bụ ndị a:
Amachibidoro ịgba chaa chaa
Nweta uru na nkesa dị egwu
Amachibidoro nnata ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ nke mmasị ọ bụla (riba - ọzọ na nke a gaa n'ihu na ibe)
Mmekọrịta arụmọrụ azụmahịa, n'egbughị oge
Emere akaụntụ Islam iji sọpụrụ ntọala nke ego Islam na iji mee ka ndị okwukwe nke Alakụba nwee ike ịbanye na azụmaahịa azụmaahịa ụwa niile. Ekwesiri ime nke a n'ihi na isi ihe anọ dị iche iche ekwuru n'elu anaghị adaba na ọdịnala azụmaahịa ọdịda anyanwụ.
Maka ndị ahịa na-achọ idobe ụkpụrụ okpukpe ha na ohere ọ bụla ọ bụla, itinye azụmaahịa azụmaahịa mbụ bụ ụzọ a ga-esi mee ya. Enwere ike iwere ọdịdị nke azụmaahịa azụmaahịa dị ka ihe ziri ezi, dịka na nkọwa ya, ọ naghị emegide ụkpụrụ ndị bụ isi nke ego Islam.
N'ihe banyere mbu ahia, ihe ahia, ebuka, ọdịnihu na klas ndị ọzọ ama ama, ndị okwukwe Alakụba na-echekarị ma azụmaahịa ọ bụ haram ma ọ bụ halal. Na-eburu n'uche ihe ndị bụ isi mepụtara nke ahia n'ịntanetị, na eziokwu ahụ bụ na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụwa bụ onye na-eso ụzọ okpukperechi Alakụba, ọ bụghị ihe ijuanya na a na-ewelite isiokwu nke ahịa itinye ego na Islam.
Dị ka ndị dị otú a, ngalaba a nke 'Otu esi amata ma ọ bụrụ na Forex Trading bụ Halal' anyị ga-enyocha echiche dịgasị iche iche na isiokwu ahụ. Na olile anya - ịza ajụjụ a dị oke mkpa - 'ọ bụ ahia azụmaahịa ma ọ bụ haram?' Site n'ịmụ ahịa ahịa ahịa na ihe dị mkpa, omume ya; anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ gbasara nke enyere ngwa ahịa aka ịzụ ahịa na otu esi eme ka ị bụrụ onye na-azụ ahịa azụmaahịa halal, ebe ị na-agbaso iwu Sharia.
Yabụ, ịzụ ahịa azụmaahịa na-adọta ọtụtụ ndị ahịa na kwa ụbọchị ma bụrụ nnukwu ụzọ ị nwere ike iji nweta uru. N'ezie, ụmụazụ nke Islam okwukwe na- enwe ike ileba anya n'ọnọdụ ego ha (na nke ọzọ), ebe ha ka na-asọpụrụ ntọala nke ego Islam.
N'ihi eziokwu ahụ, ịzụ ahịa azụmaahịa bụ ire na ịzụta ego, ọ nwere ike ibido dị ka a ga - asị na nke a ga - abụ nnukwu ohere itinye ego maka ahịa. Enwere n'ezie ihe ole na ole ndị ọzọ ị ga-atụle. Otu ihe atụ nke obere ntụ ntụ na mpaghara a ga-abụ ma ọ bụrụ na ị ga-azụta dollar US na dollar Australia, wee ree ya na ụbọchị na-esote - nke a ka bụ azụmahịa azụmaahịa halal.
Agbanyeghị, na omume, ọtụtụ nsogbu nwere ike ibilite, nke anyị na-enyocha n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Forex Riba - Ego Islam
Mgbe a bịara n’ihe gbasara ịnabata ọmụrụ nwa ma ọ bụ ịkwụ ya, ihe ga-esikwu ndị mmadụ ike maka okwukwe Alakụba.
N'ezie, riba na Arabic pụtara 'mmụba na ngafe', ebe okwu Bekee bụ 'mmasị'. Yabụ maka onye na-eso ụzọ okpukperechi Alakụba, a na-ewere riba n'ọtụtụ ebe ka amachibidoro ya, agbanyeghị, enwere ọtụtụ arụmụka banyere ihe mejupụtara riba.
Na ahịa azụmaahịa azụmaahịa, ọ bụ ụkpụrụ omume na mgbe emechara nnọkọ azụmaahịa, onye na-etinye ego ga-emeghe ụfọdụ ọnọdụ. Ọ bụ n'oge a ka Forex broker ga-akwụ ụgwọ ihe a maara dị ka 'mgbanwe ọrụ'. Nke a dị na mmekorita nke ọmụrụ nwa (ego abalị).
Thezọ kachasị mfe iji kọwaa usoro a bụ na onye na-ere ahịa azụmaahịa nyere gị ego mgbapụta (site na itinye ego), dị ka mgbazinye ego ọ bụla, onye na-ere ahịa (na nke a onye ji ụgwọ) ga-enweta uru. Ọ bụ n'ihi ebumnuche ndị a kpọtụrụ aha n'elu ka a ga-ewere akaụntụ azụmaahịa a na-ahụkarị dị ka ihe ọjọọ - ihe kpatara nke a bụ na ọrụ ahụ gụnyere ọnụego ọmụrụ nwa (ego abalị).
Yabụ, ịzụ ahịa azụmaahịa ọ bụ nke ziri ezi? Ee e, ọ bụghị ozugbo akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa batara na akụkụ ahụ. Ka o siri dị, a naghị elezi akaụntụ azụmaahịa Forex anya dị ka ihe halal.
Agbanyeghị, site na iwepụ ego nkwụnye ego gbanwere, akaụntụ azụmaahịa Alakụba bụ ezigbo ihe.
Nke a bụ n'ihi na ndị okwukwe Alakụba nwere ike wepụta mgbazinye ego na-enweghị ọmụrụ nwa, na-eche itinye ego iji nweta uru. Ma, n’ezie, a kwụghachiri ego mbinye ego na-akwụghị ụgwọ nye onye ji ya ụgwọ. Halal Forex forex abụghị nwa na ọcha, yabụ onye na-ere ahịa azụmaahịa nwere ike ịgba onye ahịa ahụ ụgwọ n'ụzọ ndị ọzọ, dịka ịkwụ ụgwọ maka ọrụ na ụgwọ ndị ọzọ (iji wee nweta uru).
Nke a bụ ebe enwere ike ịtụle ụgwọ ndị a dị ka ọmụrụ nwa. Mgbe m kwuchara nke ahụ, ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-akwado usoro a iji nyere aka na ọganihu nke azụmaahịa azụmaahịa.
Aka-Aka-Aka Forex Trading Halal
Ugbu a, n'ihe gbasara mgbanweta ahụ n'onwe ya, ọ na-ere ahịa azụmaahịa Forex ma ọ bụrụ na eme ya 'aka'? Na nnoo - ee, Islam na-anabata ahia, mana a ghaghi ime ya n'aka. Azụmaahịa 'aka na aka' bụ azụmahịa n'etiti azụmaahịa na azụmaahịa. Azụmahịa azụmaahịa a na-arụ ọrụ ozugbo ma ọ bụ ụzọ kwụ ọtọ.
Fọdụ ndị kwenyere na ebe ọ bụ na ndokwa ahụ dị n'etiti onye na-ere ahia na onye na-ere ahịa, a na-ahapụ ya ka ọ bụrụ nnọkọ abụọ dị iche iche, na-enye ya halal. Otu ndị nyocha achọpụtala na azụmahịa ahụ kwesịrị ime mgbe nkwekọrịta ahụ kwụsịrị. Nke a pụtara na azụmahịa kwesịrị ka emecha ya ozugbo. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị ahịa azụmaahịa na-eme azụmahịa na obere sekọnd, mgbe ụfọdụ obere.
Mgbe ọ na-abịa ọnụọgụ abụọ nhọrọ na Forex trading, nke a bụ ụzọ dị mfe isi nweta ego. Ma, ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-agụnye ndị ahịa na-ebu amụma ụdị ego ọnụahịa ego (mgbanwe na mgbanwe nke ngwaahịa) - yana n'ihi mmasị a ga-akwụ ma ọ bụ nweta ya na azụmahịa dịka nke a - ahia a bụ haram.
Forexzụ ahịa Forex ọ bụ egwuregwu nke ohere - ya mere Haram?
Amachibidoro ịgba chaa chaa na Islam, yana egwuregwu ọ bụla nke ohere ka amachibidoro ma were haram. Ajụjụ bụ, ọ bụ ahia azụmaahịa azụmaahịa ọ bụrụ na azụmaahịa azụmaahịa anaghị atụle egwuregwu nke ohere?
Tradezụ ahịa, nke na-ere ma na-azụ ihe, ebumnuche bụ isi nke azụmaahịa azụmaahịa bụ ịme ego site na mbenata na ịba ụba uru. Ọrụ onye na-ere ahia bụ ịnwale ma kpebie mgbanwe nke ọnụahịa akụ site na ịmụ nyocha.
Ka onye ahịa wee nyochaa ahịa ahịa azụmaahịa, ọ dị mkpa ịnwe atụmatụ na echiche dị mma. Nke a pụtara na itinye ego na ajụjụ a dabere na nyocha nke onye ahịa, ma ọ bụghị naanị egwuregwu nke ohere - yabụ site n'akụkọ niile, nke a abụghị haram.
Nsogbu Ego Islam na andgwọ - Forex Trading Halal
N'ihe banyere ihe ize ndụ na ahia, nke a bụ akụrụngwa nke ụkpụrụ dịka:
Dịka onye na-etinye ego, ị na-etinye ego na akụ. Ọ bụrụ na uru akụ gị bara uru, ị ga-enwe mfu
N'aka nke ọzọ, mgbe uru nke akụ bara ụba, ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga - enweta uru - nke pụtara na akụkụ dị egwu na akụkụ bara uru bụ otu mgbe ị na - azụ ahịa nke ọma. Mgbe ị na-ele ya anya otu a, ịzụ ahịa na okwukwe Alakụba na-arụkọ ọrụ ọnụ.
Ego Alakụba - Enwere M Ike Shazụta Ahịa?
A naghị ahụkarị ịzụta mbak dị ka haram, n'ihi eziokwu ahụ ị nwere ike ịzụta pasent na ụlọ ọrụ. Ọ ka dị ezigbo mkpa iji hụ na ụlọ ọrụ ị na-azụta oke na omume n'ime iwu Sharia.
E nwere ụlọ ọrụ abụọ dịkarịsịrị ọrụ na-arụ ọrụ, site na ntụgharị ala Islam:
Haram omume omume: A na-ahụta mgbanwe ngwaahịa ka haram ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ a na-ekwu okwu na-arụ ọrụ na ụlọ akụ, ịgba chaa chaa, mmanya ma ọ bụ riba (mmasị).
Ihe omume Halal: A na-ahụkarị ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ dịka uwe, nrụpụta, njem ụgbọ mmiri, ala na ụlọ, arịa ụlọ na ngwa ahịa ka ha ghara inwe azụmahịa na omume haram.
Somefọdụ ndị na-eme nchọpụta na-ele ya anya na a ka nwere ike itinye gị na mbak ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-ere obere ọrụ na ngwa ahịa na-abụghị nke halal. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụlọ ọrụ ị na-etinye ego na ya nwere ike ịnwe ọtụtụ ọrụ, mana a nabatara ọtụtụ n'ime ha dị ka azụmaahịa halal.
N'oge a, iji soro iwu Sharia, ị ga-enwerịrị uru ọ bụla ị nwetara site na ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ, wee nye ego ahụ maka ọrụ ebere. Fma ọ bụ ịmaatụ, ọ bụrụ na uru 15% sitere na ire mmanya, 15% nke uru gị dum ga-enyerịrị na ọrụ ebere akwadoro.
Akaụntụ Forex Trading Forex - isslọrụ
Otu n'ime ihe ndị na-eme ka azụmaahịa halal Forex na-atọ ụtọ bụ na n'adịghị ka akụkọ ndị ọzọ na-azụ ahịa azụmaahịa, enweghị mmasị mgbanwe gbanwere ma ọlị. Ka o siri dị, nke a mechara mee ka ọ bụrụ ihe ziri ezi. Dika anyi metu aka na ntuziaka a, ihe kpatara nke a bu na onye na-ere ahia na-eweputa onodu ahia, o ghaghi imeghe ya, mgbe ahia mechara (n'abali), na-eme ya haram (n'ihi na ugwo ugwo n'abali abata igwu egwu).
Ọ dabara nke ọma, akaụntụ azụmaahịa halal Forex na-ewepu ọmụrụ nwa dị na azụmaahịa, na-enyere ndị na-eso ụzọ Alakụba aka ịzụ ahịa n'udo na ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị kwesịrị ekwesị. Ma, tya ka na-ajụ ajụjụ a; kedu ka ọ bụ gịnị ka ndị azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ala na-akwụ n'ihe gbasara ọrụ?
Ndị ahịa azụmaahịa Halal na-akwụkarị ụgwọ ndị a:
Onweghị ego ndị a kwụrụ n'elu nke ndị ji akaụntụ azụmaahịa azụmaahịa a na-ewere dịka riba haram.
MetaTrader - Akaụntụ Islam
Ikpo ahia a na-ejikarị na ụwa n'etiti CDFs na ndị na-ere ahịa ahịa bụ MetaTrader platform. Ajụjụ bụ, MetaTrader na-agbaso usoro iwu Islam?
N'ihi eziokwu ahụ bụ na MetaTrader bụ naanị usoro ịzụ ahịa, a na-eche na ọ bụ halal. MetaTrader bụ naanị interface, ngwa ahia na-enyere ndị ahịa aka ịmepe iwu na ahịa.
Ọ baghị uru ma ị na-eji akaụntụ azụmaahịa ọkọlọtọ, akaụntụ azụmaahịa Alakụba, ma ọ bụ akaụntụ pro - a ga-eme iwu gị n'otu ụzọ ahụ. Ikpo okwu agaghị emegharị ma ọ bụ mezie ọnọdụ azụmaahịa gị ma a bịa itinye ego, yabụ onye na-ere ahịa gị ga-abụ onye ga-akọwa mgbanwe ọ bụla.
Naanị ihe nwere ike inwe ụdị mmetụta ọ bụla na ịbụ onye ahịa haram ma ọ bụ nke ndị ahịa halal bụ azụmaahịa azụmaahịa Forex ị kpebiri. Yabụ, ị nwere ike izere mmasị site na ịhọrọ akaụntụ azụmaahịa Alakụba site na onye na-ere ahịa gị.
Akaụntụ Islam - Otu Ntuziaka Na Forex Trading
Ka ọ dị ugbu a, ị ga-enwe ntụkwasị obi na ịmara na ọ ga-ekwe omume ndị mmadụ okwukwe Alakụba na-ekere oke na azụmaahịa halal na-agbaso n'usoro ego Islam.
Ugbu a, anyị ga-eleba anya na ụdị atọ ahụ trading azum nke ị ga-enwe ike iji na akaụntụ gị halal Forex Forex.
Akaụntụ Islam - Trading Swing
Nke a bụ naanị otu ụzọ atọ dị mkpa ịzụ ahịa. Ndị ọzọ bụ scalping na ụbọchị trading (a ga-ekpuchi ha abụọ).
Ihe mbụ ikwuru banyere nke a bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-asọpụrụ ego Islam na-enweghị nchegbu, ị ga-arụ ọrụ na akaụntụ Islam. Nke a bụ naanị ụzọ iji zere ịkwụ ụgwọ ọmụrụ nwa ọ bụla.
Ịzụ ahịa swing A na-eche na ọ kachasị dị ize ndụ nke ntinye ego atọ anyị depụtara, ebe ọ gụnyere ịmeghe ọnọdụ maka ihe ọ bụla site na ụbọchị ruo izu. Agbanyeghị, akaụntụ azụmaahịa nke enweghị swap dị ezigbo mkpa na nke a.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere mgbe ọ bụla ihe ize ndụ na onye ahịa nwere ike imeghe ọnọdụ na mmalite nke ụbọchị, na ebumnuche nke imechi ya tupu ahịa ahụ mechie, naanị ichefu. Ọ bụrụ na n'ọnọdụ a, ị nwere akaụntụ ọkọlọtọ, iji nọgide na-asọpụrụ ụkpụrụ nke ego Islam (ya bụ enweghị ọmụrụ nwa kwere), ị ga-ahapụrịrị uru ego ọ bụla ọzọ.
Ọ bụrụ na dịka onye ahia ị nwere akaụntụ Islam, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ uru ọ bụla sitere na ohere azụmaahịa a.
Akaụntụ Islam - Day Trading
Tradingbọchị ahia gụnyere imeghe ọnọdụ nke a ga-emechi tupu njedebe ụbọchị ahịa (nke bụ mgbe ahịa ahụ mechiri).
N'ụzọ dị mma, ịkwụ ụgwọ nke ọrụ swap na-agbanwe site na ịzụ ahịa ụbọchị. Nke a bụ n'ihi na ọnọdụ emeghe anaghị anọ n'abalị. Otu ihe ahụ na-aga maka akaụntụ ahịa ọ bụla. Ọzọkwa, ị ka kwesịrị ịgba mbọ hụ na ị naghị edebe ọnọdụ azụmaahịa otu ụbọchị mepere emepe n'oge gara aga, n'ihi na nke a ga-eweta mmasị (ọ bụrụ na ị na-eji akaụntụ na-abụghị nke halal)
Akaụntụ Islam - Scalping
Scalping bụ ụdị azụmaahịa ọzọ, dị ka azụmaahịa azụmaahịa. Scalping gụnyere imeghe ọtụtụ obere ọnọdụ, nke ọ bụla ga-emechi n'ime nkeji, ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ sekọnd. Emere ọnọdụ ndị a ka ha mechie ọnụego ngwa ngwa (dị ka azụmaahịa azụmaahịa). Nke a pụtara na enweghị ego ọmụrụ nwa etinyere ka ọ na-emepe ma mechie na ụdị ọsọ ọsọ dị otu a.
Nke a pụtakwara na onye na-azụ ahịa scalping nke Islam, ị nwere ike iji akaụntụ azụmaahịa a na-azụkarị. N'aka ozo, achoghi ahia ahia ndi Islam ka ekwuru - ma nke a bu na o nweghi onodu obula ghe oghe abali.
Dị ka ọ dị na ịzụ ahịa azụmaahịa, ọ bụrụ na ịchọrọ idobe ọnọdụ gị ogologo oge, ị ga-aka mma karịa iji akaụntụ Islam iji zere ịkwụ ọmụrụ nwa.
Ihe kpatara nke a bụ na mgbe ọnọdụ nwere ike gbanwee ogologo oge, ọ ga-eme ka ọnụọgụ nke uru bara ụba. nke a ga - egosi na ị ga - enweghị ihe ọzọ ị ga - eme ma ị belata ọnọdụ gị tupu ịmalite ịkwụ ọmụrụ nwa.
Hala Akaụntụ Forex Trading - Uru
Otu uru dị ukwuu n'iji akaụntụ azụmaahịa halal Forex bụ na enweghị ọrụ ịgbanwere ego metụtara. Ka o siri dị, ị nwere ike ijide n'aka na ị na-azụ ahịa azụmaahịa n'ụzọ iwu kwadoro.
Site na akaụntụ Islam, uru a na-ahụ anya ozugbo bụ na enweghị ọnọdụ mgbanwe, yana nke a pụtara na ị nwekwara ike imeghe ọnọdụ ogologo oge ebe ị na-ezere ohere ịbelata uru gị n'ihi ọrụ mgbanwe.
Otu uru ndị ọzọ pụtara ama mgbe ị na-eji akaụntụ azụmaahịa halal Forex bụ na ị nwere ike mepee ọnọdụ na ụzọ ego, ma zere ụgwọ mgbanwe siri ike. Ọnụ ego gbanwere nwere ike ịdị oke elu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ụzọ ego abụọ dị iche iche wee zere ndị a bụ nnukwu uru.
Hala Akaụntụ Forex Trading - ọghọm
N'ezie, enweghị inwe swap nwekwara ike hụrụ dị ka ọghọm n'ihi na ị gaghị enwe ike iji zuru uru nke nnukwu mmasị ịkwụ ụgwọ mgbe metụtara obere ọnọdụ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, na-enweghị mmasị onye na-abụghị mgbanwe gbanwere ahịa ga-erite uru site n'ụdị uru ụfọdụ. Yabụ, nke a ga-abata n'ụdị ego nchịkwa ha. Nke a bụkwa otu ụlọ akụ ndị Alakụba ka nwere ike irite uru.
Akaụntụ Islam - Gini ka m ga-ahia?
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ahịa dị maka ịzụ ahịa, onye ọ bụla na-etinye ego nke bụkwa onye na-eso ụzọ nke okwukwe Alakụba nwere ike ịnọ na-eche ụdị akụ a na-ewere dị ka ihe iwu na nke haram
Yabụ, iji soro iwu Sharia mgbe ị na-ere ahịa site na akaụntụ azụmaahịa Alakụba, ị ga-achọ ịma akụ nke ị nwere ike itinye ego na ya iji nyere gị aka ịnọgidesi ike n'okwukwe gị.
Ozi ọma ahụ bụ na a na-ewere imirikiti ahịa ahịa ka ihe ziri ezi, na-agbanyeghị ọdịnihu na agbụ.
Ọnụ ego ọmụrụ nwa na-arụ ọrụ n'oge a ga-ewepụta ya wee nọgide n'ụzọ ahụ n'oge ịdị adị. Dabere na ọkọnọ na ọchịchọ na ahịa, nkekọ nwere ike ịgbanwe na-agbanwe. Ntinye ego ntinye ego (gbakọọ site na uru nke mbụ) ga-anọ otu ọ dị.
N'ihi n'eziokwu na agbụ na-adabere na ọnụego ọmụrụ nwa, a na-ahụta agbụ dị ka haram. Nke a bụ n'ihi na agbanyeghị - dịka ọmụmaatụ, itinye ego na CFD pụtara na akwụghị gị ọmụrụ nwa ọ bụla - mkpebi ikpe bụ na mgbọrọgwụ nke mgbasa ahụ ka nwere uru ọnụego ọmụrụ nwa.
Dịka oge igbu oge na-eme na nkwekọrịta n'ọdịnihu, a na-ahụta ha dị ka ihe haram. Nke a gbadara n'eziokwu ahụ bụ na emeghị aka mbinye aka na ire ọrịre ozugbo.
Onweghi nkpuru ego ndi Islam choro dika anyi matara, nke putara na onweghi nke obula karie maka ego ndi Alakụba. Mgbe ha kwusịrị nke ahụ, ha na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ ụzọ abụọ ego ọhụụ.
Mgbanwe ndị a na-adabere n'ụzọ dị ukwuu na mgbanwe ọkọnọ na ọchịchọ. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, a ga-ekwu ọnụ ahịa dollar US megide ego dị iche iche iji mepụta ụzọ, nke a nwere ike ibute ịrị elu ma ọ bụ daa uru.
N'ihe banyere ego nke Alakụba, ị nwere ike ịtụle cryptocurrencies dị ka halal. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na cryptocurrencies anaghị adabere na ọmụrụ nwa (ọ bụghị n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ ozugbo).
Goodsfọdụ ngwa ahịa ndị ọzọ a na-ahụta ka ihe halal bụ akụrụngwa dịka ngwaahịa na ọla.
Esi emeghe a Hala Akaụntụ Forex Trading
N'ebe a, anyị ejirila otu ụzọ esi eduzi otu esi emeghe akaụntụ azụmaahịa halal.
Choo uzo iru ahia nke ichoro ichoro anya, nke nwere ike inye gi ohere inweta ihe omuma banyere islam. (ụfọdụ ndị na-agbanwe agbanwe ga-ewere akaụntụ ọdịnala wee gbanwee ya ka ọ bụrụ nke halal maka gị, ọ bara uru ịjụ).
Nye akwụkwọ niile dị mkpa iji mata onye ị bụ.
Debe ego na akaụntụ azụmaahịa gị.
Ozugbo ị kwụrụ ụgwọ akaụntụ azụmaahịa gị, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka akaụntụ azụmaahịa Alakụba gị (na-arụ ọrụ n'okpuru Iwu Sharia)
Nwere ike ịtụ anya ịnata nnabata nke akaụntụ gị n'ime otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, kpọtụrụ ndị ọrụ ọrụ raara onwe ha nye ma ha ga-enwe obi ụtọ ịchọpụta oge maka gị.
Nwere ike ịmalite ịzụ ahịa na akaụntụ azụmaahịa halal Forex!
Akaụntụ Ntanetị Halal kacha mma nke 2021
Agbanyeghi na nyiwe ahia mbu na mbu amalitela inyocha uru nke inye ihe omuma banyere ihe banyere halal, obughi ihe nile. Dịka, ịchọta onye na-ere ahịa azụmaahịa nke na-egbo mkpa gị na nke okpukpe nwere ike ịbụ ihe ịma aka. A sị ka e kwuwe, ịkwesịrị ileba anya n'ihe ndị ọzọ mgbe ị na-ahọrọ akaụntụ azụmaahịa Alakụba - dị ka ụgwọ, ụkpụrụ, ụzọ ịkwụ ụgwọ, na ụzọ abụọ na-akwado ego.
Iji nyere gị aka igosi gị n'ụzọ ziri ezi, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nhọrọ nke akaụntụ azụmaahịa halal Forex na-eduga ohere na 2021.
1. eToro - Best Halal Forex Account maka Ndị Mbido
eToro bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị ugbu a na-etu ọnụ ihe karịrị nde ndị ahịa 12 n'ụwa niile. Uzo a na enye otutu puku akụrụngwa ego sitere na klas dị iche iche. N’elu Forex, nke a gụnyekwara ebuka, indices, ngwa ahịa na cryptocurrencies. A na-achịkwa ikpo okwu nke ọma, nke gụnyere ikikere sitere na FCA, ASIC, na CySEC.
N'ihe banyere akaụntụ azụmaahịa Alakụba ya, eToro na-ekwu na ọ nweghị riba n'ụdị ọ bụla. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa Forex, ị daa imechi ọnọdụ ahụ tupu elekere 5 nke oge New York, mgbe ahụ ahia ga-agbanye. Ọ bụ ezie na nke a ga-eweta ụgwọ ego ego abalị, nke a abụghị ikpe na akụkọ Alakụba na eToro.
Akaụntụ Islam na eToro na-ejikwa mmụba na-enweghị ọmụrụ nwa, ọ nweghịkwa ụgwọ ma ọ bụ ego maka imepe akaụntụ ahụ. Kama, eToro na-enweta ego ya site na mgbasa. N'ihe banyere ịmalite, ịkwesịrị ịmalite na akaụntụ ọkọlọtọ, wee jiri ego opekata mpe nke $ 1,000 kwụọ ya. Mgbe nke ahụ gasị, ịkwesịrị ịkpọtụrụ ndị na-akwado ndị ahịa eToro iji mee ka ha mata na ịchọrọ ịmepe akaụntụ azụmaahịa halal.
anaghị akwụ ụgwọ ego n'abalị
2. AvaTrade - Best Islamic Forex Account maka ndị ahịa MT4
Ọ bụ ezie na eToro na-ewu ewu na ndị ahịa ọhụụ, ọ nwere ike ọ gaghị adabara ndị gị na-achọ ọkaibe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, AvaTrade dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe azụmaahịa n'okpuru eriri gị, ma ịchọrọ ịnweta ụdị ngwaọrụ dị oke elu.
N'ụzọ dị oke mkpa, onye na-ere ahịa na-enye nkwado zuru oke maka MT4, yabụ ị ga-enwe ike ịnweta ngwa ọgụgụ eserese, akara ngosi ọrụ, na nghọta ahịa. Nwere ike ịwụnye dịka Forex EA iji zụọ ahịa na nnọchite gị, ebe nke a dakọtara na AvaTrade na MT4. A na-achịkwa onye na-ere ahia na ya kpamkpam, yana ọtụtụ ikikere usoro iwu n'okpuru eriri ya.
N'ihe banyere ahia ahia nke Islam, AvaTrade na-ekwu na nkọwa dị ka nke akaụntụ ọkọlọtọ - mana ya na otu ihe dị iche. Nke ahụ bụ, enweghị mmasị ma ọ bụ ụgwọ pụrụ iche a na-akwụ ụgwọ, nke pụtara na ihe ndekọ aha ya dabara na ụkpụrụ iwu nke iwu Sharia.
Iji nweta akaụntụ Islam nke mepere na AvaTrade, ịkwesịrị imeghe akaụntụ ọkọlọtọ, kwụọ ụgwọ ya, wee kpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa. Ozugbo enyocha, ị kwesịrị ị na-melite n'ime 1-2-arụ ọrụ ụbọchị. Na mmechi, AvaTrade na akwado otutu uzo ugwo, tinyere kaadi debit na waya.
MT4 ahia ahia
Ọtụtụ nke ego akwadoro
Ewe naanị 1-2 ụbọchị iji nweta akaụntụ Islam
Anaghị akwado e-wallets
Ọ bụrụ n’ị meela nke a, ị ga-enwe nghọta ka mma banyere azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ma ọ bụ na ọ bụghị halal. Okwesiri ighota na obu ezie na obughi ndi ahia ahia ahia n’enye ndi Islam. Ma, ụfọdụ ndị na-ere ahịa Forex ga-adị njikere ịgbanwe ya ma gbanwee akaụntụ ahịa azụmaahịa ọdịnala na Islam Forex trading akaụntụ. Ọ bụrụ n'ịchọta onye na-ere ahia dị njikere ime nke a, ọ nwere ike bụrụ atụmatụ na-enye aka.
Agbanyeghị, anyị na Mụta 2 Trade ga-arụ ụka na ọ kachasị mma ịkpọ ya egwu. Nke ahụ bụ ịsị, anyị ga-esoro ndị na-ere ahịa na ntanetị na-enye akụkọ ihe mere eme nke Alakụba. Dị ka ndị na-azụ ahịa tupu oge eruo anyị tụlere na ntuziaka a, ị nwere ike 100% ijide n'aka na ị na-azụ ahịa na ụkpụrụ nke Islam.
Kedu ka esi mepee akaụntụ islam Forex broker?
N'ọtụtụ oge, ị ga-ebu ụzọ chọta onye na-ere ahịa na-enye akụkọ banyere Islam. Ikwesiri imeghe akaụntụ ọkọlọtọ, zute ego nkwụnye ego pere mpe, wee kpọtụrụ nkwado ndị ahịa na-arịọ ka agbanwee akaụntụ gị na akaụntụ Islam. Usoro a na-ejikarị dechara n'ime 1-2 ụbọchị ọrụ.
Kedu ụdị ego ị nwere ike iji azụmaahịa islam were zụọ ahịa?
Enweghi uzo ego di iche nke amachibidoro mgbe ahia na akaụntụ Islam. Dika odi otua, i gha enweta uzo, umu aka, na ihe ndi ozo.
Kedu ka ị si enweta ego maka akaụntụ Forex forex?
Imirikiti ndị na-ere ahịa na-enye gị nhọrọ nke itinye ego na akaụntụ gị na kaadị debit ma ọ bụ akaụntụ akụ. Fọdụ na-enyekwa e-wallets dijitalụ dị ka Paypal.
Kedu ka ndị na-ere ahịa si enweta ego na akaụntụ Islam?
N'ọtụtụ ọnọdụ, onye na-ere ahịa ga-enweta ego site na mgbasa. Nke a bụ ihe dị iche na nzụta na ire ego nke ihe dị mkpa.
Kedu ihe na-eme ego abalị mgbe ị na-eji akaụntụ azụmaahịa Alakụba?
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa site na akaụntụ Islam, mgbe ahụ ọ nweghị ego ị ga-etinye n'ọrụ n'abali.
Kedu ihe bụ akaụntụ na-enweghị swap?
Ihe ndekọ ego na-enweghị ego na-ezo aka na ikpo okwu nke na-agaghị ana gị ụgwọ ego ị ga-akwụ ụgwọ n'abalị maka idobe ọnọdụ oge gara aga.
Fọdụ na-eme, ee. Ma, onye na-ere ahia agaghị akwụ ụgwọ ego, ọmụrụ nwa, ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla n'abali.